I-GoDaddy ithi ukwephula uphawu lwentengiso kusizinda seGo-Daddy esithengwe kwaGoDaddy | Martech Zone
Namuhla ngithole ucingo oluvela kubanumzane abebezibuza ngobudlelwano bami neNoDaddy.com, isayithi elidla iGoDaddy ngemikhuba yalo yebhizinisi.
Ngemuva kokuthi ngiqale ukukhuluma noJohn, ngamangala ukuthi kwenzakalani ngaye. UJohn uthenge i-Go-DADDY-DOMAINS.COM ne-Go-DADDY-DOMAIN.COM kusuka ku-… ubani omunye… GoDaddy.com. Angiqiniseki ukuthi uJohn wamangala yini noma cha ukuthi ukwazile ukuthenga izizinda, kepha yimina!
Uma uzibuza ukuthi uJohn uyisigaxa yini noma uzama ukusizakala ngeGoDaddy, angikholwa kanjalo. Wayazi ukuthi kunethuba lokuthenga izizinda, kepha angicabangi ukuthi inhloso yakhe yayimbi. Ngikhuluma noJohn ocingweni, ngizwa sengathi akayazi le mboni ngaphakathi nangaphandle, uvele wabona ithuba futhi wagxumela kulo.
Yilapho kuba mnandi khona:
Kusuka: Ukwephulwa komthetho
Kuthunyelwe: NgoLwesibili, Agasti 21, 2007 1:08:25 PM
Isihloko: GO-DADDY-DOMAINS.COM ne-Go-DADDY-DOMAIN.COM Ukwephulwa kophawu lwentengiso
Kufinyelele ekunakekeleni kwethu ukuthi amagama wesizinda amabili owabhalisile aphula uphawu lwentengiso eyodwa noma eziningi zeGoDaddy.com.
Njengoba kungenzeka wazi, i-GoDaddy.com wuphawu lokuhweba olubhalisiwe lwe-GoDaddy.com. Sibhala ngenhlonipho ukukwazisa ukuthi ukusebenzisa kwakho igama elithi "Go Daddy" egameni lakho lesizinda noma igama lesizinda elifana kakhulu no-e noma elididayo elifana nelika- "Go Daddy" kungenzeka lidale ukudideka esigcawini ngakho-ke kungenzeka kuthathwe njengokwephula uphawu lokuhweba lweGoDaddy.com.
Ngenxa yalokhu, sithanda ukukubuyisela imali ngokuthenga kwakho lezi zizinda bese uhambisa izizinda ku-akhawunti yethu.
Sicela ube nomusa kakhulu ukuqala ushintsho lwe-akhawunti kuleli kheli le-imeyili zingakapheli izinsuku eziyi-10. Uma unemibuzo ngale nqubo, ngicela ungithinte ngokuphendula kule imeyili.
Manje uGoDaddy, othengise izizinda kuJohn, manje usefuna uJohn ukwephula uphawu lwentengiso?! Cabanga nje !? Ngingazwelana empeleni uma uJohn ethenga isizinda kusuka ku- okuncintiswana… Kodwa uGoDaddy wamthengisela yona !!! Kufana nokungena ku-Starbucks, ukuphuma nenkomishi yekhofi bese usongelwa yi-Starbucks yokuba ngumnikazi wekhofi.
Ihlazo kuGoDaddy. Kuyahlekisa ukuthi abathathanga izinyathelo ezidingekayo ku- a) ukubhalisa ezinye izizinda noma b) okungenani bazibekele umsebenzi wabo ukuze bangazithengisi bona ngokwabo. Ngiyaqiniseka ukuthi I-GoDaddy ayithengisi nje ngama-boobs, ziqhutshwa ngamabhubhisi futhi.
Uma wazi ngommeli omuhle ongasiza uJohn ukuphuma, sicela ubeke amazwana kule bhulogi ngolwazi oluthile lokuxhumana. UJohn uzobe efunda imibono.
Tags: copyrightdomainhamba-ubabagodaddyukwephula umthethonodaddyuphawu lokuhweba
Izimpi Zesiphequluli: I-Internet Explorer iyaqhubeka nokulahlekelwa yiFirefox, Yini iSafari?
I-Direct Marketing isishintshile - Hhayi umThetho wama-40/40/20
Aug 25, 2007 ku-12: 31 AM
Yini oyikhethe kuDotster kulezi zinsuku?
Aug 25, 2007 ku-10: 31 AM
Bengihlala ngicabanga ukuthi uDotster wayengumbhalisi wesizinda ongcono - amathuluzi we-backend ayengcono kakhulu kuneGoDaddy. Ngiyakholelwa ukuthi iGoDaddy iwina ohlangothini lokukhangisa lwebhizinisi, noma kunjalo.
Iningi labantu licabanga ukuthi zonke izinhlelo zokusebenza ziyefana kuze kube othile uhlaziya izivumelwano zomsebenzisi. UDotster akasoze aphazamisa i-akhawunti yakho ngaphandle kwalapho ephoqelelwa ngokomthetho.
Sep 12, 2007 ngo-10: 21 PM
UDotster umise isizinda sami godaddysgirls.com futhi manje i-WIPO isiyilawule ize iphazamiseke. Uma kukhona ongangisiza ungazise.
Aug 25, 2007 ku-10: 52 AM
Angiqondi ukuthi kungani abantu besayethemba iGoDaddy…
Dec 31, 2008 ngo-1: 06 PM
Ngisebenzise amagama wesizinda amahle ngawashiya ngawathenga ngokuhamba kwesikhathi noGo daddy wabamba futhi wabhalisa ngaphansi kwegama labo.
I-Thsi ukubamba inkunzi kukhanya emini. John ungapheli amandla !!
Aug 26, 2007 ngo-9: 11 PM
Angazi noma yibaphi abameli, kepha ngazi amabhulogi amabili angahle abe nentshisekelo kule ndaba
Bangazi ngamanye ama-dudes asemthethweni okusiza.
(Bengingazazi zonke lezi zinto ngeGoDaddy - yilapho bengilokhu ngithenga khona zonke izizinda zami !!! Grrr)
Aug 26, 2007 ngo-9: 30 PM
Siyabonga ngalezo zixhumanisi iNathania! Ngihambise indaba kuzona zombili lezo zingosi. Ngokuqondene ne-akhawunti yakho yeGoDaddy, ungahlala ulinde kuze kube yilapho sezizophelelwa yisikhathi bese uyabadlulisa. I-Dotster imvamisa inokudluliswa kwesaphulelo.
Ngibonga nje iqiniso lokuthi ukuphela kombhalisi wesizinda lokho kudinga amaphepha asemthethweni ngaphambi kokuba benze noma yini kumakhasimende.
Aug 26, 2007 ngo-10: 35 PM
Siyabonga ngesikhombi se-Domain Name News Nathania. Empeleni ngiyamangala ukuthi uGodaddy akezanga ngemuva kweNoDaddy.com.
UGodaddy empeleni futhi kwi-TOS yakhe okuthile okuthinta umnikazi wesizinda kufanele akhokhele noma yiziphi izinyathelo zomthetho (njenge-UDRP) elethwa nge-godaddy. Ngakho-ke ngiyazibuza ukuthi ngabe lo muntu bekufanele akhokhele lokho futhi? Noma njengoba iphathwe ngo-godaddy ngaphakathi mhlawumbe badlula lezo zimali. 🙂
Le nto yonke ibukeka ingenabungozi kuzo zombili izinhlangothi. Umuntu wenza iphutha. UGodaddy umthumelela i-imeyili futhi amtshele kanjalo bese ecela ukumbuyisela imali yakhe. Kufanele avele athathe imali ayibuyise ahambe. Akukho okubi. Akukho ukungcola. Empeleni njengama-2cents ami kulokhu. Kufanele athathe umnikelo wemali yakhe awubuyisele njengesibusiso. . . manje angaya ukubhalisa amanye amagama angcono.
Ukukhuluma ngo-godaddy no-dotster. UFrank (umphathi wami wesibili ekuphatheni izindaba zegama lesizinda) ubhale lesi siqephu esikhanyisa izinkampani zombili.
Okokugcina, ngokuqondene nabameli (uma ngabe kudingekile ngisho nokuzikhathaza.. Engicabanga ukuthi akusifanele isikhathi sakhe ukusihlupha). Angabheka kuJohn Berryhill (johnberryhill.com) noma u-Ari Goldberger (esqwire.com) noma uPaul Keating (renovaltd.com) phakathi kwabanye abaningi. Uma ugoogle amagama abo uzothola imininingwane eminingi ngempumelelo yabo ekusingatheni la macala. Ngisola ukuthi bazosho into efana naleyo engiyeluleke ngayo. Nikeza amagama emuva. Buyisela imali yakho. Qhubeka uthenge amagama ambalwa angcono kumbhalisi ohlukile 😉
Aug 27, 2007 ku-5: 52 AM
Siyabonga ngokuthatha isikhathi nokubhala impendulo ebabazekayo!
Nov 1, 2007 ngo-1: 34 PM
Lokhu kuthakazelisa kakhulu. Nginomnikazi we-rackdaddy.com ne-rackdaddy.net kusukela ngo-2001. Bobabili babhaliswe nombhalisi ohlukile, hhayi iGoDaddy.Com. Ngibhalise ekuqaleni konyaka kulo hlelo lwe-GoDaddy.Com lokusebenzisana futhi zombili izizinda ziqondisa kabusha kumaseva wazo. Ngokuyinhloko ukwenza iGoDaddy.Com umlingani wami webhizinisi kulo msebenzi.
Namuhla ngithole i-imeyili yefomu evela kuGoDaddy.Com nokulandelayo emzimbeni:
Ngalokhu sifuna ukuthi usheshe: uyeke ukusebenzisa kwakho okungagunyaziwe kwalezi zizinda, ukhansele ukuthunyelwa kwala magama wesizinda; bese udlulisa amagama wesizinda ku-GoDaddy.com ngoNovemba 16, 2007.
Ngiyazibuza ukuthi ngabe ngabe uphawu lwentengiso bazobhekisa kuphi, ngoba angingabazi ukuthi babengeke babe noPhawu lohwebo kuleli gama? Uma kunjalo yonke ingane kufanele yonge imali yayo ukuze ikhokhele ilungelo lokusho? Daddy?…
Aug 27, 2007 ngo-1: 44 PM
Lokhu kuhlekisa kakhulu uma uthi nhlá. Kepha uma uhlola lokhu kahle, yebo, u-godaddy wenze okulungile. Inhloso kaJohn ngokuqinisekile kwakungekhona ukuthuthukisa okuthile okwakungamayelana noGodaddy kuleli gama lesizinda. Kuhle ukungangeni ezinkingeni ezisemthethweni kepha ubuyise imali bese ubhuka elinye igama lesizinda, bese uliqeda.
Aug 27, 2007 ngo-12: 52 PM
Bathi: “sithanda ukukubuyisela imali ngokuthenga kwakho lezi zizinda bese uhambisa izizinda ku-akhawunti yethu.” Kubonakala sengathi bathi bafuna kepha amagama wesizinda abuyele emuva. Mhlawumbe bekuyi-snafu yeziphathimandla futhi bekungafanele ngabe bazithengisile kwasekuqaleni futhi manje baletha imisipha yezomthetho kanye nembuyiselo yokubabuyisa.
Kubukeka njengokungasebenzi kahle kunenhloso embi.
UJohn Charles Webb
Isenzo sokuqala ukuthola ukuthi ngabe “Go Daddy”, empeleni, wuphawu lokuhweba olubhalisiwe hhayi nje isiqinisekiso sokuthi unophawu lwentengiso olubhalisiwe.
Okwesibili, isixhumanisi esiya ku-GoDaddy.com kunoma yimaphi amakhasi okusolwa ukuthi acasula kuzonciphisa kakhulu noma yiziphi izingqinamba eziqinisekisiwe 'zokudideka' maqondana namagama wesizinda afanayo afanayo.
Iqiniso lokuthi izizinda ezonayo, empeleni, zathengiswa yiGoDaddy kuzoba nesisindo esikhulu esivuna uJohn. UJohn unenkontileka noGoDaddy, okubonakala sengathi uyeke amalungelo abo okuqinisekisa noma iyiphi inkinga yokwephula umthetho ngoba bathengisela (inkontileka yokuthengisa) amagama wesizinda kuJohn.
Isiphakamiso sami ukuthi ucabangele ukuthengisa izizinda ezonayo ubuyele ku-GoDaddy.com ngama- $ 25,000 lilinye.
Aug 27, 2007 ngo-4: 02 PM
Kukhona izimpawu zokuthengisa ezi-3 ze-godaddy.com, ezi-3 ze-go daddy, ne-1 ze-go daddy software. Zibheke phezulu kusayithi le-USPTO.Gov. Ngokubona njengezimpawu zokuhweba ezihlanganisa izizinda njengesevisi, ngicabanga ukuthi noma ikuphi ukusetshenziswa kwezizinda okuthi GO-DADDY-DOMAINS.COM ne-Go-DADDY-DOMAIN.COM kungahle kwephule amamaki abo.
Futhi, uJohn unenkontileka no-godaddy futhi kwinkontileka avumile ngayo, ithi (phakathi kwezinye izinto eziningi)
“Iya kuDaddy unelungelo lokunqaba, lokukhansela noma lokudlulisa noma ikuphi ukubhaliswa okubona kufanele, ngokubona kwakhe, ukuvikela ubuqotho nokuqina kwerejistri, ukuhambisana nanoma yimiphi imithetho esebenzayo, imithetho kahulumeni noma izidingo, izicelo zomthetho. , ngokuhambisana nanoma iyiphi inqubo yokuxazulula izingxabano, noma ukugwema noma yisiphi isikweletu, esomphakathi noma esobugebengu, ngasohlangothini lweGo Daddy, kanye nezinhlangano ezingaphansi kwayo, izinkampani ezingaphansi, abaphathi, abaqondisi kanye nabasebenzi. IGoogle Daddy nayo inelungelo lokubamba igama lesizinda ngesikhathi sokuxazulula impikiswano. ”
“Iya kuDaddy unelungelo lokukhokhisa imali yesevisi efanelekile ngemisebenzi yezokuphatha engaphandle kwemisebenzi yayo ejwayelekile. Lokhu kufaka, kepha kungagcini lapho, izingqinamba zesevisi yamakhasimende ezingakwazi ukusingathwa nge-imeyili kepha ezidinga insizakalo yomuntu siqu, nezingxabano ezidinga izinsizakalo zomthetho. Lezi zinkokhelo zizokhokhiswa kwiNdlela Yokukhokha esinayo efayeleni lakho. Ungashintsha indlela yakho yokukhokha nganoma yisiphi isikhathi ngokungena ngemvume ku-Akhawunti Yakho ye-Akhawunti. ”
Konke kungabonakala lapho ufunda isivumelwano ngesikhathi sokubhalisa (ukuthi akekho ofunda ngokusobala) noma kusixhumanisi esingezansi
Iseluleko sokucabanga ukuthengisa lezi zizinda ku-godaddy yiseluleko esibi. Thatha imali yokubuyiselwa kwemali uqhubeke. Iphutha lenziwe. Isifundo esifundile. UGodaddy ufunde isifundo kulokhu futhi ngineqiniso.
Aug 27, 2007 ngo-8: 51 PM
Ngiyamzonda u-godaddy. Bathathe isizinda sami ngoba othile uthumele isithombe se-porn kepha ngisho nomqaphi wami wedatha akashongo lutho, kepha u-godaddy. Uma ubhalise ne-godaddy, empeleni bangabakho isizinda sakho. Babiza u- $ 75 ukukukhiphela wena ... ukwenza kwabo ibhizinisi akukuhle neze nokusebenzisa kabi amandla abo.
Aug 28, 2007 ku-2: 12 AM
Le akuyona indaba nakancane, kuhle ukuthembeka u-godaddy bekufanele athenge isizinda. iqiniso lokuthi lithengiswe ku-godaddy, noma ngabe yimuphi umbhalisi angathengisa noma yisiphi isizinda iqiniso elimsulwa elivela kuwe.
uma behlinzeka ukwephulwa kwe-copyright bakwenza ngezizathu ezifanele. kahle ngineqiniso lokuthi ubengeke alethe ukuzokwengeza isikibha sakhe, ubekwazi ukuthenga isizinda.
Sep 12, 2007 ngo-10: 12 PM
UGoDaddy uzama ukuthatha isizinda sami godaddysgirls.com kimi futhi. Ngiyabuzwa ubuhlungu bakho.
Iya kuzithangami ze-NODADDY.com ngosizo oluthile.
Jun 22, 2008 ku-3: 16 PM
UGoDaddy ube ngumlingani omkhulu webhizinisi iminyaka eminingana.
Jan 6, 2009 ngo-9: 30 PM
Uxolo bafo. Kuyi-cybersquatting yakudala. Asikho isidingo - futhi impela bekungeke kwenzeke- ukuthwebula zonke izinhlobo zethayiphu, ukwehluka nokwandiswa kwezimpawu zakho zokuhweba. Ukubhalisa okuvikelayo kungaba umqondo omuhle kwezinye zezinto ezisobala, kepha akudingeki. Futhi i-Anti-Cybersquatting Act idala isikweletu se- $ 100,000 + sokubhaliswa kuzimpawu zokuhweba ezaziwayo. Bheka lezi zinsizakusebenza ukuthola eminye imininingwane:
I-Cybersquatting ne-Domain Trademark Blog
UJun 27, 2009 ngo-7: 14 AM
Ulwazi lukaGodaddy luhle.Ngisebenzisa isiza seGodaddy Reseler http://www.tucktail.com/ OkweNqubo Yokubhaliswa Nokubhaliswa Kwegama Lebhizinisi Lami ..